I-Dredge Isetshenziselwe Ukugcina Umfula iJhelum & Vimbela Izikhukhula eKashmir
Ukulondolozwa KweJhelum Kusindise IsiGodi KuZikhukhula: IGovt
Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-50, i-original Ellicott® brand dredge yeJhelum yokonga dredge isebenza eceleni kwemodeli yamanje.
Source: IGreater Kashmir ka-Arif Shafi Wani
'Ukudonswa Okusimeme Kukhulise Amandla Okuphuma Komfula'
Srinagar, Sep 16: Iphrojekthi yokulangazelela ukusindisa umfula iKashmir iJhelum isiqalile ukuletha imiphumela emihle nohulumeni waseJammu nowaseKashmir ngokuthi izinsongo zezikhukhula ezibangelwe yimvula engapheli yancipha ngenxa yezindlela eziqhubekayo zokonga emfuleni enyakatho yeKashmir.
I-Jhelum okuwumthombo ophambili wokunisela eSigodini ibilokhu igqugquzelwa ukusikwa okukhulu emashumini eminyaka edlule. Ngaphandle kwezindlela zokonga, umfula ubusuphelelwe ngumthamo futhi uholele ekunqandeni kwesiteshi saso esisodwa esivelayo eBaramulla, okubeka engcupheni yezikhukhula eSigodini.
Funda kabanzi Ngokudilizwa Komfula
“Imisebenzi eqhubekayo yokongiwa kwemvelo eJhelum esifundeni iBaramulla ibe yimpumelelo njengoba besingabalekela usongo lwezikhukhula muva nje. Ngokudonsa njalo amanzi, sisuse ukuvimba emfuleni iBaramulla futhi sakhuphula kakhulu ukuphuma komfula, ”kusho uTaj Mohi-ud-Din, uNgqongqoshe Wezokunisela Nokulawulwa Kwezikhukhula etshela iGreater Kashmir.
Udabuka eVerinag eningizimu yeKashmir, iJhelum ijoyinwa yimifudlana emine, iSurendran, iBrang, i-Arapath neLidder esifundeni esiseningizimu neKashmir i-Islamabad (Anantnag). Ngaphandle kwalokho, imifudlana emincane efana neVeshara neRambiara nayo iphakela umfula ngamanzi amasha.
UJhelum meanders ngendlela yobudlova esuka eningizimu uye eNyakatho Kashmir futhi uhlala eWullar, ichibi elikhulu lamanzi angenawo usawoti e-Asia, ngaphambi kokuthulula ePakistan kulawulwa iKashmir ngeBaramulla. Ochwepheshe bathi isikhukhula esadala umonakalo ngo-1959 sabangela imiphumela yamanzi emuva kuJhelum ngenxa yokugeleza okuncane okuvela eWullar Lake enyakatho neKashmir okucishe kwaminyaniswa ukunqwabelana okusindayo komsele ophuma ngaphandle.
“Sisuse amathani kadoti esiteshini esiphuma ngaphandle. IJhelum Conservation Project iyazisimamela njengoba ukudayiswa kukadaka kulande uHulumeni ngamarandi amakhulu amabili ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. Sizoyisebenzisa le mali ekulondolozweni komfula isikhathi eside, ”kusho uTaj engeza ukuthi laba baduni ababili abenziwe eMelika basheshise inqubo yokongiwa kwemvelo.
Ama-dredger enziwe yi-Ellicott Dredges yase-US - omunye wabakhiqizi abadala kunabo bonke bemishini yokudonsa. Ngenhlanhla, u-Ellicott Dredges wayenikeze i-Ellicott® brand dredger yokuqala yokulondolozwa kweJhelum ngo-1960. Umdonseli wayethunywe nguNdunankulu wangaleso sikhathi uJawahar Lal Nehru.
Kutholwe ngentengo yama-Rs 12 crores, ama-dredger aqanjwe ngo-Soya II no-Budshah II aklanyelwe ukwenza ukudana okujulile. U-Aijaz Rasool we-KEC Mumbai omele i-Ellicott Dredges eNdiya uthe lo msebenzi wokudonswa kwempahla usuqhubeke ngokugcwele eJanbazpora naseJuhama eBaramulla.
"Ngokuqhubeka sizinze kulezi zindawo, singagwema ukuvama kwezikhukhula zeminyaka eyikhulu eSigodini. Kodwa lokhu bekungeke kwenzeke ngaphandle kwababhali, "wengeza.
Izikhulu zithi uNdunankulu wangaleso sikhathi kaJammu noKashmir Bakshi Ghulam Muhammad ngasekupheleni kweminyaka yama-50s baye kuHulumeni waseNdiya bezofuna izeluleko zochwepheshe nesisombululo sonjiniyela kule nkinga. Ngaphansi kokuholwa ngongoti beCentral Water Commission, kwahlelwa i-Master Plan yokwenziwa kabusha kwemisebenzi kaJhelum kusuka eWullar kuya eKhadanyar.
Le phrojekthi ibicabanga ukujula nokwandiswa kweJhelum kusuka eSingli kuya eSheeri ngabakwa-mered dredger. Kodwa-ke, ngaleso sikhathi, ama-dredger ayengekenziwa noma atholakale kalula eNdiya. Iziphathimandla zithi kungenxa yokugenelela komuntu siqu kukaNdunankulu ngaleso sikhathi uJawahar Lal Nehru ukuthi abathengisi ababethembekile bathengwa.
"Kodwa-ke, umsebenzi wokumba kabusha uqhubeke kuphela kwaze kwaba ngu-1986. Wamiswa ngenxa yokushoda kwezinsizakusebenza ezanele nezinsiza zokulondoloza. Kusukela lapho amathani okufakwa kukadoti enzeka eJhelum ngenxa yokwehla ngokushesha kwamachibi awo. Lokhu kunciphise ukusebenza kwezikhukhula kwesiteshi sokuphuma kukaJhelum kanye namandla aso okususa ama-cusecs angama-35000 ngo-1975 kuya kuma-cusecs angama-20000 njengamanje, ”kusho izikhulu.
UMnyango Wezokulawulwa Kwezinkasa Nezikhukhula ngo-2009 wathumela iphrojekthi yamarandi angama-Rs 2000 eMnyangweni Wezinsizakusebenza Zamanzi ukuze ivunyelwe. Le phrojekthi ibandakanya imisebenzi eminingi yokubuyisela kubandakanya ukwenziwa ngcono kokudilizwa okukhona kukaJhelum kwemigudu yokuwa, ukuvikelwa, nemisebenzi yokulwa nokuguguleka nokwanda kokusebenza kahle kwe-hydraulic.
Kodwa-ke, uMnyango uvume kuphela ingxenye yephrojekthi ebiza ama-Rs 97 crores ukwenza lula ukungenelela okusheshayo okubandakanya ukuthengwa kwemishini nokudonswa phansi eJhelum, ikakhulukazi iziteshi zayo zokuchitheka kwesikhukhula eSrinagar nokugeleza okuphuma eDaubgah naseNingli eBaramulla. UTaj uthe yonke imininingwane ephathelene namazinga okuphuza kanye nokukhipha amanzi, isilinganiso sezikhukhula namandla kaJhelum kule minyaka engama-50 edlule yenziwe yedijithali.
“Siphinde saqala nokumba iziteshi ezichithela izikhukhula eSrinagar nasezindaweni ezakhelene nalokhu ngaphandle kokumisa imikhumbi sisuka eSonwar siye e-Old City. Ngemuva kokuphothula ukudilizwa, sihlela futhi ukususa konke okuhilelekile osebeni lomfula ukusuka e-Islamabad kuya eBaramulla. Eminyakeni embalwa, iJhelum izobuyiselwa ebuhleni bayo obucacile, ”kwengeza uTaj.
Ishicilelwe kabusha kusuka eGreater Kashmir